နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Moveis Marathon
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:15 AM
khin oo may April 8, 2011 at 1:45 AM
Faster Poster အရုပ်မမြင်ရပါ။။ မူးသွားမယ်ထင်တယ် လေးကားဆက်တိုက်တော့မကြည့်ဘူးဘူး ။ နစ်ကားဆက်တိုက်ဘဲကြည့်ဘူးတယ် ဒါတောင် မူးတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Limitless ကိုရွေးရမဲ့သဘောရှိတယ်။ ပထမကတော့ faster ကြည့်ဦးမလို့ တဝက်ထိ လေးတယ်ဆိုရင်တော့ပျင်းစရာကြီး. စကားပြောတာလဲနားမလည်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားမိမှာဘဲ။ အချစ်ကားတော့မကြည့်တော့ . ကာတွန်းကားလည်းမကြိုက်.တော့.
Rita April 8, 2011 at 9:51 AM
အညွှန်းကောင်းထာ။ တကားမှ ကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်မသွားဘူး။
MrDBA April 9, 2011 at 11:59 AM
ရီတာ ပြောတာပဲ ရယ်ဖို့ကောင်းတယ် .. (တော်သေးတာပေါ့ ရီတာရှေ့က ရေးသွားလို့ပဲ မဟုတ်ရင် လာဖတ်ရတာ အလကားဖြစ်တော့မှာ ... ဟမ် ခွိ)